लकडाउन हटाइएपछि लिबाङमा चहलपहल- प्रदेश ५ - कान्तिपुर समाचार
'नेकपा संकटमा छ, ओलीको पहल र सक्रियतामा एमाले दर्ता गर्न लागियो'
दाहालको प्रश्न, 'नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्ने पार्टी राष्ट्रघाती र दलाल हुने अनि जारी गर्न ढिलो गर्ने सरकारको देवत्वकरण गर्ने ?'
काठमाडौँ — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको भए पनि यसको जस प्रधानमन्त्रीले एकलौटीरुपमा लिन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पुष्पलाल स्मृति समारोहमा बोल्दै दाहालले भने, 'नक्सा जारी गर्नु भनेर निर्णय गर्ने पार्टी राष्ट्रघाती र दलाल हुने तर नक्सा जारी गर्न ढिलो गर्ने सरकारको चाहिँ देवत्वकरण हुने ?'
'नीति तथा कार्यक्रम आउने दिन बिहान बसेको सचिवालय बैठकले नक्सा जारी गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी सहमत हुनु भएको हो र त्यहींबाट मूख्य सचिवलाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा यो थपिएको हो,' उनले भने, 'त्यसरी नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा आयो । नक्सा जारी भयो र यसले पूरै देशलाई राष्ट्रिय एकताको भावना जोड्यो । तर पार्टीको सामूहिक विवेकले गरेको निर्णयको जस एकैजनाको मात्रै खल्तीमा हाल्ने हो भने त्यो इमान्दार ठहर्दैन ।'
उनले आफ्नो पार्टी नेकपा संकटमा रहेको पनि बताए । 'पार्टी संकटमा छ । छैन भनियो भने त्यो गलत हुनेछ । अहिले बैठक चलिरहेको छ । मैले सार्वजनिक रुपमा पहिले पनि भनेको छु, पार्टी संकटमा छ । ठीक ठाक छ भनेर मैले भनें भने त्यो सत्य हुँदैन । त्यो साँचो होइन । किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चलिरहेको समयमा निवार्चन आयोगमा नेकपा एमाले नामको अर्को पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्षको पहल र सक्रियतामा भएको छ । त्यसकारण त्यसले सकंटकलाई व्यक्त गरेकै छ । यो सबैले देखेकै कुरा हो ।'
तर, सरकारले त्यस किसिमको तयारी गरेको देखिएन । संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान एकैछिन बसेको सचिवालय बैठकमा नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पार्नै पर्‍यो भनेर भन्यौं । अन्त्यमा त्यही बैठकमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो । त्यही बैठकबाट मूख्यसचिवलाई फोन गरेर प्रेसमा छापिइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने कुरा थप गर्न लगाइयो । त्यो पार्टीको निर्णय थियो । एकजना कमरेडले भन्नुभयो, 'पार्टीको निर्णय सरकारले मानिदिँदा कति राम्रो हुने रहेछ त । नक्सा प्रकाशित भयो, संविधान संशोधन भयो । सारा नेपाली गौरवान्वित भए । जनतामा राष्ट्रिय एकताको भावना देखियो, सब एकताबद्ध भए । पार्टीको निर्णयबेगर सरकारले निर्णय गर्नखोज्दा कति धेरै विवाद आए, कतिधेरै अन्यौल जन्मिए' भन्ने कुरा राख्नु हुँदै थियो ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७७ १७:२४